Raysal wasaaraha Soomaaliya: Al-Shabaabku ma cabsi-gelin doonaan Soomaaliya - Sabahionline.com
Raysal wasaaraha Soomaaliya: Al-Shabaabku ma cabsi-gelin doonaan Soomaaliya Abriil 05, 2012
Raysal wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa sheegay in weerarkii Masraxa Qaranka ee Arbacadii (4-ta April) aanu leexin doonin dedaallada ay dawladdu kula dagaallamayso al-Shabaab, Garowe Online-ta Soomaaliya ayaa werisay.
Haweeney isku qarxisay saraakiil joogtay masraxa qaranka Muqdisho
Falanqeeyayaal: Al-Shabaab oo isku-daygeedii ugu dambeeyay maciinsatay is-miidaamiyeyaal dumar ah
"Tani na bajin mayso, nagana lexin mayso jidkii aannu haynay,” ayuu Cali ka yiri shir jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay sacado ka dib qarixii dhacay, “Al-sshabaab waxaa soo wajahday guuldarro taa ayaana sabab u ah in ay u ciirsadaan tabaha diciifka ah oo yaqyaqsiga mudan sida kuwan oo kale.” Ugu yaraan lix qof ayaa la diley 10-na waa la dhaawacay ka dib markii sida la sheegay ay gabar yari qarxisay suun miinooyin ah oo u xirraa, taa oo lala beegsanayey Cali iyo saraakiisha kale ee dawladda ee u dabbaaldegayey sanad-guuradii koowaad ee saldhigga telefishanka dawladda. "Dad aan waxba galabsan ayaa lagu diley qaraxa dawladda FKMG ahina waxay samaynaysaa wax kasta oo ay ku hagaajinayso amniga si aanay u dhicin weerarrada caynkan oo kale ah,” ayuu yiri Cali, isagoo uga mahadceliyey saraakiisha amniga, ciidamada iyo bilayska sida ay ugu guulaysteen in ay ka hortagaan weerarro caynkaas oo aad u tiro badan oo Muqdisho ka dhici lahaa. Ciidamada amniga ayaa caasimadda uga jira hegan buuxa, sida uu Arbacadii Idaacadda Shabeelle u sheegay ku xigeenka madaxa amniga gobolka Banaadir Warsame Maxamed Joodax. Muqdisho ayaa waxaa halkeeyey werarro garnaylo ah iyo kuwo is-biimayn ah ila berigii ay bishii August kooxda al-Qaacida la xulufada ah ee xarakada al-Shabaab ay uga heleeleen saldhigyadii joogtada ahaa ee ay ku lahaayeen caasimadda, oo ay markaa u ciirsadeen taatikada goriillaynta. Raysal wasaaraha ayaa tacsi u gudbiyey qoysaska dadkii qaraxa ku geeriyooday oo uu ku jiray guddoomiyihii Guddiga Olombikada Soomaliyeed Aadan Xaaji Yabaroow “Wiish” iyo guddoomiyihii Xiriirka Kubbadda Cagta Soomaaliya, Saciid Maxamed Nuur “Mugaanbe.” Muxuu kula yahay qoraalkan?